I-"swings" yama-metabolic: kungani ungalahlekelwa isisindo nokuthi ungayibhekana kanjani nayo
Kuthiwa okuningi nge-syndrome ye-metabolic, kodwa akukho lutho oluchazayo. Phakathi naleso sikhathi, lokhu kuyisizathu esivamile sokwenza kahle kokuqeqeshwa nokudla. I-essence ilula: ngenxa yokudla okungalungile futhi uphumule amangqamuzana omzimba athola ukumelana ne-insulin futhi, ngenxa yalokho, ukugcoba. Ukuhlushwa kwezinto ezingenayo igaxa egazini kwanda futhi kuholela ekungalingani kwemvelo. Uhlangabezana nokukhathala okuqhubekayo, ukucasuka, ukuhlukunyezwa kwe-migraines nokucindezela - futhi amakhilogremu angeke ahambe, kungakhathaliseki ukuthi uthuthumela kanjani ehholo. Yini okufanele ngiyenze?
Funda ukulala kahle. Lokhu akuyona ihlaya - ukulala okunempilo nokunamandla kubeka esimweni inhlalakahle, kunciphise isisindo futhi kubiza umzimba ngamandla. Ungakhohlwa ukudla okulula okunamandla, amafilimu angokomzwelo kanye nomsebenzi wesikole osebenzayo ngaphambi kokulala. Bese ubeke ingilazi yogurt noma ucezu lwe-granola, iwashi elifudumele nencwadi emnandi. Futhi ungagcini imali ngemithonjeni emihle kanye ne-mattress omzimba wama-orthopedic - lokhu kuyikhokha encane yokungabi khona kwe-osteochondrosis ne-neuralgia.
Buyekeza imenyu yakho. Akukhona ngokudla okunzima futhi okuphuthumayo - kukwanele uma wenqaba "ama-carbohydrate" angenalutho (ukudla okusheshayo, ama-dessert nama-creams, ama-bakes asezimboni, i-soda), izinkomishi ezingalawuliwe zekhofi nezibuko zobhiya. Yethula kancane kancane ekudleni imifino yesitashi, imifino, isinkwa se-rye, ithathe inyama enamafutha anamandla, namaswidi - ama-mousses ama-curd nama-cheesecake alula. Umphumela ngeke ube yisikhathi eside.
Ukuzivocavoca ngokuhlakanipha. Amakilasi amabili - kathathu ngeviki ayisebenzi: kungcono kakhulu ukukwenza ngemithwalo evamile yendlu. Ukuhamba ngemva kwansuku zonke komsebenzi noma ukuhamba ngehora ngenja epaki kuzothinta isibalo ngokushesha kunokuqeqeshwa okukhulu kodwa ngezikhathi ezithile.
Thrush - isifo sesifazane
Igazi yiyona nhlangano esemqoka
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-galena
Yiziphi imikhiqizo ezisiza ukususa uketshezi emzimbeni
Izakhiwo zokwelapha nemilingo ye-beryllonite
Ukulimaza izitsha ezilahlayo
Ukuntula i-anemia noma i-vitamin B12, kuyini ingozi?
Mask nge demixid: zokupheka ezilula izinwele ezinhle
Indlela yokwenza i-paper swatter ezandleni zakho
Amakhekhe amancane ommbila anama-blueberries ne-vanilla unamathele
Kulula kangakanani futhi ngokushesha ukufunda olunye ulimi lwangaphandle?
Izipho zonyaka omusha zezingane 2009-2010
Ama-Steaks ku-sesame ne-rosemary
Yiziphi izithelo eziwusizo kakhulu ngobuhle
Ngabe amaSneakers Isabel Marant adla ngani?
Indlela yokusebenza: kungakhathaliseki ukuthi ungumngane omnandi
Isaladi lesiklabishi lamaShayina
Umthelela wesilinganiso sombala kukhwalithi yokuphumula
Yini amantombazane abathanda abafana?
Lungisa ebhodini ngezandla zakho